Nhau - Maitiro ekuita kuti kambani yako ikure zvakatsiga nemakwikwi epamusoro gumi
Maitiro ekuita kuti kambani yako ikure zvakatsiga pamwe nepamusoro gumi kukwikwidza
Kuti chero kambani ikure zvine mutsigo uye zvakadzikama, inofanira kukudziridza makwikwi ayo epamoyo.
Kukwikwidzana kwepakati peimwe bhizinesi kunoonekwa pakutanga mune mamwe masimba. Musimboti wemakwikwi webhizimusi unogona kuve wakaora kuita gumi mukati zvichibva pakuwongorora kwazviri kuratidzwa, kunodaidzwa kunzi kukwikwidza gumi.
(1) Kuita sarudzo kukwikwidza.
Rudzi urwu rwemakwikwi ndiko kugona kwebhizimusi yekuona misungo yekusimudzira nemikana yemusika, uye kupindura shanduko yezvakatipoteredza nenzira yakakodzera uye inoshanda. Pasina kukwikwidza uku, iko kukwikwidza kunove kwakaora. Sarudzo-yekukwikwidza uye yemakambani masimba ekuita sarudzo ari muhukama hwakafanana.
(2) Kukwikwidza kwesangano.
Makwikwi emakambani emakambani anofanirwa kupedzisira aitwa kuburikidza nemasangano ebhizinesi. Chete kana zvikave nechokwadi chekuti kuzadzikiswa kwezvinangwa zvehurongwa zvebhizinesi zvapedziswa, vanhu vanoita zvese, uye vanoziva zviyero zvekuita nemazvo, ndipo zvinobatsira zvinoumbwa nemakwikwi ekutora-sarudzo asingatadze. Zvakare, simba rekutora sarudzo uye simba rekuuraya emabhizinesi zvakavakirwa pairi.
(3) Kukwikwidzana kwevashandi.
Mumwe munhu anofanirwa kutarisira zvihombe uye zvidiki zvinhu zvebhizimusi sangano. Chete kana vashandi vakakwanira zvakakwana, vachida kuita basa rakanaka, uye vachishivirira nekuzvipira, ndipo pavanogona kuita zvese.
(4) Maitiro kukwikwidza.
Maitiro acho huwandu hwenzira dzega dzega dzekuita zvinhu mumasangano akasiyana siyana uye nemabasa ekambani. Iyo inodzora zvakananga kugona uye kushanda kwekushanda kwesangano rebhizinesi.
(5) Kukwikwidzana kwetsika.
Kukwikwidzana kwetsika isimba rekubatanidza rinoumbwa nehunhu hwakajairika, nzira dzakajairika dzekufunga uye nzira dzakajairika dzekuita zvinhu. Iyo inonyatso kuridza basa rekuronga mashandiro esangano rebhizinesi uye kusanganisa zviwanikwa zvemukati nekunze.
(6) Brand kukwikwidza.
Mhando dzinofanirwa kuve dzakavakirwa pahunhu, asi mhando yega haigone kuita chiratidzo. Icho chiratidzo cheyakasimba yemakambani tsika mupfungwa dzeveruzhinji. Naizvozvo, zvakare zvinoumba zvakananga kugona kwebhizimusi kubatanidza zviwanikwa zvemukati nekunze.
(7) Kukwikwidza kwechiteshi.
Kana bhizinesi richida kuita mari, purofiti, uye kusimudzira, rinofanirwa kuve nevatengi vakakwana kuti vagamuchire zvigadzirwa nemasevhisi.
(8) Kukwikwidza mutengo.
Yakachipa ndeimwe yeanokosha masere ​​iyo vatengi vanotsvaga, uye hapana vatengi vanopa'Ini ndine hanya nemutengo. Kana mhando nemhando yechiratidzo zvikaenzana, mukana wemutengo kukwikwidza.
(9) Kukwikwidzana kwevadikani.
Nebudiriro yenzanga yevanhu nhasi, mazuva apo zvese zvisingabvunze rubatsiro uye kuita zvese zviri munyika zvazove chinhu chekare. Kupa vatengi neakakosha-akawedzera masevhisi uye kugutsikana kwekukosha, isu zvakare tichagadzira musangano wehukama.
(10) Inokwikwidza kukwikwidza kwezvisefa zvinhu.
Isu tinofanirwa kuve nekuenderera mberi nehunyanzvi kutanga. Ndiani anogona kuramba achigadzira hunyengeri pakutanga, ndiani anogona kusakundikana mumakwikwi emusika uyu. Naizvozvo, haisi chete yezvakakosha zvemukati zvebhizinesi rutsigiro, asi zvakare yakakosha zvemukati yekuitwa kwebhizinesi.
Aya makwikwi makuru ekukwikwidza, seyakazara, akavezwa seyepamberi kukwikwidza kwebhizinesi. Kuongorora kubva pakuona kwesimba rekubatanidza zviwanikwa zvemakambani, kushomeka kana kudzikiswa kwechero ipi yeiyi gumi yezvinhu zvekukwikwidza zvinozotungamira kudonha kweichi kugona, ndiko kuti, kuderera kwekukwikwidza kwepakati kwebhizinesi.
Post nguva: Oct-11-2020